यी हुन् गण्डकीबाट ओली पक्षमा थपिएका १०९ केन्द्रीय सदस्य, कास्कीका मात्रै २६ जना - Samadhan News
यी हुन् गण्डकीबाट ओली पक्षमा थपिएका १०९ केन्द्रीय सदस्य, कास्कीका मात्रै २६ जना
समाधान संवाददाता २०७७ पुष ८ गते ७:४५
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रष्ट रुपमा विभाजन भएको छ । नेकपाका नाममा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षले मंगलबार छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखे । बैठकले नेकपा टुक्रिएको प्रष्ट चित्र कोरेको छ ।
निर्वाचन आयोगमा अहिलेसम्म एउटै पार्टी रहे पनि दुबै पक्षले आफूहरु नै वैध दाबी गरेका छन् । आधारिक पार्टी कुन हो भन्ने छिनोफानो अब न्यायलयसम्म पुग्ने निश्चित छ । ओली र प्रचण्ड समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले मंगलबार तल्लो तहसम्मै प्रभावित र कित्ताकाट गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले १ हजार १ सय ९९ जनाको केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै घोषणा गरे । प्रथम अध्यक्षका हैसियतले ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा ५ सय ५६ जना थप गरेर कमिटी घोषणा गरेका छन् ।
ओली समूहले नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रचण्ड पक्षमा भएपछि ओली पक्षले प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रवक्ता तोकेको छ । प्रचण्ड–माधव समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरेर नयाँ अध्यक्षमा माधवकुमार नेपाललाई चयन गरेको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको प्रस्तावमा नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको हो ।
ओलीले अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन गरेकाले पार्टीको अन्तरिम विधान अनुसार अनुशासनको कारबाही गरी पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहले निर्णय गरेको छ ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहले नेकपा केन्द्रीय कमिटीका दुई तिहाई सदस्यले आफूहरुको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको दाबी गरेको छ । ४ सय ४७ जना केन्द्रीय समिटी सदस्यमध्ये ३ सय १० केन्द्रीय सदस्यले बैठक स्थलमा राखिएको पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेको प्रचण्ड पक्षको दाबी छ ।
प्रचण्ड पक्षको बैठकले संसद विघटनको घोषणालाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी, निरंकुश र स्वेच्छाचारी भन्दै भत्र्सना र अस्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
ओली समूहको केन्द्रीय समिति बैठकबाट प्रवक्ता बनेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘पार्टीको अध्यक्ष, महासचिव र माइन्युटबिना पनि बैठक बस्छ र ? त्यो बैठकको निर्णयको कुनै वैधानिकता हुँदैन ।’ प्रवक्ता ज्ञवालीले अध्यक्षबाट ओलीलाई कारबाही गर्नु हाँस्यास्पद भएकोसमेत बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली समूहको बुधबार प्रदेश भेलासमेट हुँदैछ । प्रचण्ड समूहले अर्को बैठक बिहीबार ११ बजे बोलाएको छ । जिल्ला तहका थुप्रै जिल्ला तहका नेता ओली समूहको केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् भने केही अर्को गुटका भनिएका नेता पनि ओली पक्षमा देखिएका छन् ।
कतिपय प्रचण्ड समूहका नेता पनि ओली समूहमा देखिए भने केही प्रचण्ड पक्षमासमेत लागेका छन् । अहिलेसम्म कुनै पनि पक्षमा नलागेर तटस्थ रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पक्षधर भनिएका नेकपा स्याङ्जा अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गैह्रे पारस ओली पक्षको केन्द्रीय सदस्य भएको सार्वजनिक भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा ओली पक्षका नयाँ केन्द्रीय सदस्य बन्ने जिल्लामा कास्कीका सबैभन्दा धेरै २६ जना छन् । ओली पक्षको नेकपा गण्डकीका सचिव गोविन्द नेपालीले कास्कीपछि बागलुङका सबैभन्दा धेरै केन्द्रीय सदस्य बनेको जानकारी दिए । सूची अझै थपघट हुने क्रममै रहेको नेपालीले बताए ।
यी हुन् गण्डकीबाट ओली पक्षमा थपिएका केन्द्रीय सदस्य
पुष्पा केसी भण्डारी
छिरिङ ल्हामो गुरुङ
टासी साङ्मो गुरुङ
पोल्देन छोतेन गुरुङ
ट्रिपल पी गुरुङ
सूर्यप्रसाद गैह्रे पारस
देवी थापा क्षेत्री
ताज मोहम्मत मिया
मनोहर विश्वकर्मा पौडेल
भीमप्रसाद शेरचन सुनील
डा. सूर्य पाठक
पद्मा जिसी श्रेष्ठ